वेबसाइट डिजाइन र Semalt SEO
धेरै व्यक्तिलाई यस तथ्यको बारे थाहा छैन कि एसईओको वेबसाइटको डिजाइनमा एकीकरणले अनलाईन व्यवसायको सफलतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
जब वेबसाइटको हेराई, प्रयोगकर्ता अनुभव, र खोज इञ्जिनमा स्तर सुधार गर्न आउँदछ, फोकस वेबसाइट डिजाइन र विकास सेवाहरू वा एसईओ सेवाहरू स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ।
जहाँसम्म, वेबमास्टर्स वा साइट मालिकहरूको थोरै प्रतिशतले तथ्यलाई प्रकाश पार्दछ कि वेबसाइट डिजाइन र एसईओको एकीकरण अनलाइन अपरेटिंग अपरेटिंगको समग्र सफलताको लागि आवश्यक छ।
यस लेखमा, तपाईं वेबसाइट डिजाइन र एसईओ बीचको सम्बन्धको बारेमा जान्न लाग्नुहुनेछ। अन्तमा, तपाईं बुझ्नुहुनेछ र औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ किन SEO वेबसाइट को डिजाइन प्रक्रिया को एक आवश्यक हिस्सा हुन आवश्यक छ।
कसरी वेबसाइट डिजाइन र SEO सँगै जान्छ?
खोजी ईन्जिनमा वेबसाइटको प्रदर्शन र श्रेणी सुधार गर्न, विज्ञहरू भन्छन् कि तपाईंले साना साना तत्त्वहरूलाई पनि बेवास्ता गर्नुहुन्न।
तल एलिमेन्टहरू छन् जहाँ वेबसाइट डिजाइन र SEO सहयोगी छन्। आउनुहोस् हामी बुझ्दछौं कि वेबमास्टरहरू कसरी उनीहरूलाई प्रयोग गर्दछन्।
१. मोबाईलमैत्री साइट
एक मोबाइल मैत्री साइट पहिले आवश्यक थिएन, तर स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो संख्या र इन्टरनेटको बढ्दो संख्याको साथ, एक वेबसाइटको मोबाइल मित्रता अत्यावश्यक कारक भएको छ।
२०१ 2015 मा, गुगलले घोषणा गर्‍यो कि एक वेबसाइट को मोबाइल मित्रता एक महत्वपूर्ण रैंकिंग कारक हो। अनुभवी र योग्य वेबमास्टरहरू र डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीहरू मोबाइल-मैत्री वेबसाइटको महत्त्व जान्दछन्।
विगतका केही वर्षहरूमा, डेस्कटप कम्प्युटरहरूमा खोजी गर्ने व्यक्तिको गिरावट आएको छ, तर स्मार्टफोन र अन्य मोबाइल उपकरणहरूमा खोजी गर्ने व्यक्तिहरूको निरन्तर वृद्धि भएको छ।
यदि तथ्या believed्कहरू विश्वास गर्न सकिन्छ भने, ग्लोबल वेबसाइट ट्राफिकको %१% भन्दा बढि मोबाइल उपकरणहरूबाट आउँदछ (ट्याब्लेटहरू बाहेक) यसले निम्न दुई चीजहरूलाई दर्साउँछ:
तपाईंको वेब यातायातको १% भन्दा बढि मोबाइल उपकरणहरूबाट आउन सक्छ
तपाईंको श्रोताको audience०% मा मोबाइल उपकरणहरूमा छ
यदि तपाइँको वेबसाइट को लागी मोबाइल मैत्री डिजाइन को लागी, आप अपने सम्भावित आगन्तुकहरु/उपयोगकर्ताहरु/ग्राहकहरु/ग्राहकहरु को आधा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न।
मोबाइल उपकरणहरूमा मित्रैत्र वेबसाइटहरूले यी उपकरणहरूमा राम्रोसँग लोड गर्दैन र अन्ततः उच्च बाउन्सलाई आकर्षित गर्दछ। गुगल, यसलाई अनुपयुक्त मान्दै, त्यस्ता साइटहरूलाई खोज परिणामहरूमा कम धक्का दिन्छ।
२. लोड गति
यदि तपाईं बाउन्स रेट बढाउन वा खोजी परिणामहरूमा तपाईंको वेबसाइटको लिंकमा क्लिक गर्ने मानिसहरूलाई निराश गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईंको साइट छिटो लोड हुन्छ। अध्ययनहरूले सुझाव दिन्छ कि लोड गर्न तीन सेकेन्ड भन्दा बढी लिने साइटहरू यसलाई भ्रमण गर्ने लगभग visiting०% द्वारा परित्याग गरिएका छन्।
एक वेबसाइटको ढिलो लोड गति अक्सर यसको डिजाइनको परिणाम हो। धेरै व्यवसायहरू नयाँ वा अवस्थित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न असफल हुन्छन् किनकि उनीहरूको न्यून प्रदर्शन वेबसाइटको कारण।
वेबपृष्ठको लोड गति पनि एक महत्वपूर्ण टेक्निकल एसईओ पक्ष हो। धेरै वेबसाइट मालिकहरू र व्यवसायहरूले धेरै पैसा खर्च गर्छन् तर खोजी परिणामहरूमा उनीहरूको साइटको स्तर सुधार गर्न असफल हुन्छ किनकि यसले लोड गर्न ज्यादै धेरै समय लिन्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइट २ सेकेन्डमा लोड भयो किनभने धेरै व्यक्तिहरूले स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन् र तिनीहरू मार्फत खोज्छन्। तिनीहरू बिस्तारै लोड हुने वेबसाइटको प्रतीक्षा गर्न मन पराउँदैनन्।
ढिलो लोड गतिको साथ साइटले केवल प्रयोगकर्ताहरूलाई मात्र गुगललाई पनि अपमान गर्दछ। गुगलले केहि पृष्ठहरू क्रल गर्दछ कम ईन्जिनहरूमा तपाईंको वेबसाइटको दृश्यतामा असर गर्दछ।
गुगलको कुनै खास उपकरण छ जुन एक वेबसाइटको लोड गति जाँच गर्नका लागि हो। तपाईं यसलाई क्लिक गरेर पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ
Ex. बाह्य सीएसएस र जाभास्क्रिप्ट
वेबसाइट कोडिंग गर्दा, यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि CSS र जाभा स्क्रिप्टहरू बाहिर राखिएको छ HTML तत्व / कागजात
खोजी ईन्जिनहरूले यसको HTML कागजातको मूल्या by्कन गरेर वेबसाइटको बारेमा सिक्न सक्दछन्। यदि केसमा, CSS र जाभास्क्रिप्टहरू बाह्यकृत छैनन्, कोडहरूको धेरै अतिरिक्त लाइनहरू तपाईंको वेबसाइटको HTML मा थपिन्छ।
जब तिनीहरू बाहिरीकरण हुँदैन, तपाईंको साइटको HTML कागजातले कोडका धेरै अतिरिक्त लाइनहरू प्राप्त गर्दछ। यसले सामग्रीको क्रलिंगलाई ढिलो बनाउँदछ जुन अन्तत: खोजी परिणामहरूमा श्रेणीलाई असर गर्दछ।
चाहे तपाईं गुगल, बिंग, वा कुनै अन्य खोज इञ्जिनमा तपाईंको साइटको श्रेणी सुधार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, एचटिएमएल कागजात यसको डिजाईन गर्ने क्रममा। निश्चित गर्नुहोस् कि यसको कोड र लिपिहरू सजिलैसँग र चाँडै खोजी ईन्जिनहरू द्वारा पहिचान गरिएको छ।
Simple. सरल तर प्रभावशाली डिजाइन
जब SEO को सुधार गर्ने लक्ष्य हुन्छ, वेबमास्टर्सले वेबसाइटको सामग्रीलाई परिमार्जन गर्न धेरै जसो समय खर्च गर्छन् तर डिजाईन कारकलाई वेवास्ता गर्छन्।
केहि व्यवसाय मालिकहरू वा वेबमास्टर्सले बुझ्दैनन् कि वेबसाइटको डिजाइनले सामग्रीमा मूल्य थप गर्दछ। उनीहरूले बुझ्नु पर्छ कि राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको सामग्रीले बाउन्स रेट घटाउन मद्दत गर्दछ।
खराब डिजाइन गरिएको वेबसाइटले आगन्तुकहरूलाई निराश पार्छ। तिनीहरू मध्ये धेरैले बुझ्न र असमर्थ छन् त्यस्ता साइटहरूको अवधारणा र सामग्री पढ्न।
तपाईंले वेबपेजहरू हेर्नुभएको हुन सक्छ जहाँ सामग्री ब्लकहरू अनौंठो स्थानहरूमा अवस्थित छन् वा केहि पृष्ठहरू अनावश्यक र अप्रासंगिक हाइपरलिंकले भरिएका छन्। यी सबै खराब डिजाइन वेबसाइटको उदाहरण हो।
वेबसाइट मालिकहरूले (व्यक्तिहरू वा व्यवसायहरूमा) बुझ्नु पर्दछ कि एक साइटको उद्देश्य दर्शकहरूलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गरेर उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु हो।
यदि यो गर्दैन भने, व्यक्तिहरू तपाइँको साइट भ्रमण गर्नेछन् र चाँडै यसलाई छोड्नेछन्। बाउन्स रेट बढ्नेछ, र गुगलले यो सुनिश्चित गर्नेछ कि यसले खोज परिणाममा उच्च रैंक गर्दैन।
राम्रो डिजाइन गरिएको वेबसाइटमा धेरै कमजोरीहरू हुन सक्छन्। केहि सामान्यहरू:
साइटहरू जो ब्रेक गर्दछ वा बहु यन्त्रहरूमा समान रूपमा चल्दैन
सेतो पृष्ठभूमि वा गाढा रंगको सामग्री/वेब पृष्ठमा कालो पृष्ठभूमि भएको वेबपृष्ठमा हल्का रंगको सामग्री/पाठ।
पाठको आकार धेरै ठूलो वा सानो छ
फन्ट पाठ पढ्न गाह्रो बनाउँदछ
एक वेबसाइट डिजाईन गर्दा/सामग्री सिर्जना गर्दा अपा people्ग व्यक्तिलाई वेवास्ता गर्दै
यसबाहेक, रेखा लम्बाई, सेतो अन्तरिक्ष, छविहरू, र समान तत्वहरूले आगन्तुकहरूको ध्यानलाई पनि प्रभावित गर्दछ। त्यसकारण विशेषज्ञहरूले वेब डिजाइनरहरूसँग काम गर्ने सल्लाह दिन्छन् जसले वेबसाइट आगंतुक र वेबसाइट मालिकको रुचि दिमागमा डिजाइन गर्न सक्छन्।
Head. हेडि Tags ट्यागको उचित उपयोग
हेडि tag ट्यागहरू वेबपेजको सामग्री सिर्जना गर्दा उचित ध्यान चाहिन्छ किनभने ती गुगल वा अन्य खोजी ईन्जिनहरूले HTML कागजातको संरचनाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
हेडि tag ट्यागहरू यस्तो देखिन्छन्:
<h1> हेडि </ </ h1>
<h2> हेडि </ </ h2>
<h3> हेडि </ </ h3>
<h4> हेडि </ </ h4>
र यसैले <h6> सम्म।
जब तपाईं आफ्नो वेबपृष्ठको लागि सामग्री सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले हेडि tag ट्याग ठीकसँग प्रयोग गर्नुभयो। उदाहरण को लागी, <h1> प्राथमिक शीर्षक को लागी ट्याग र <h2>, <h3>, र अन्य ट्याग सामग्री को हाइरार्की र रूपरेखा ब्लक संकेत गर्न।
विज्ञहरूले वेबपेजमा बहु <h1> ट्यागहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दैनन्। एक भन्दा बढी <h1> ट्यागको प्रयोगले प्राथमिक शीर्षक पातलो पार्छ र सर्च इन्जिन क्रॉलरहरूलाई भ्रमित गर्दछ।
Users. प्रयोगकर्ताहरूको विश्वास प्राप्त गर्दै
प्रयोगकर्ताहरूको विश्वास हासिल गर्नु महत्त्वपूर्ण कारक हो जब यो खोजी परिणामहरूमा वेबसाइटको स्तर सुधार गर्न आउँदछ। जे होस्, त्यहाँ कुनै निश्चित विधि छैन जुन व्यक्तिले ब्रान्ड र यसको साइटलाई विश्वास गर्दछन्।
धेरै व्यक्तिहरूले वेबसाइटहरू भ्रमण गरेका छन् जुन विस्तारित प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ वा तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गर्दछ। जब तिनीहरू कुनै नयाँ वेबसाइट मार्फत ब्राउज गर्छन्, उनीहरूले समान प्रकारको पूर्णताको अपेक्षा गर्छन्।
जब चीजहरू अपेक्षाहरू अनुसार हुँदैनन्, आगन्तुकहरूले विचारहरू निर्माण गर्छन्। रायहरूको बारेमा, तपाईलाई थाँहा हुन सक्छ कि व्यक्ति छिटो बनाउँछन्, र एक पटक गठन गरिएको विचार परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ।
वेबसाइटहरु पुरानो देखिन्छ, अपेक्षित जानकारी प्रदान गर्दैन, वा/र प्रयोग गर्न जटिल हो अक्सर प्रयोगकर्ताको अनुभव अप्रिय बनाउँछ। जब व्यक्तिहरू त्यस्ता साइटहरू भ्रमण गर्छन्, तिनीहरू छिट्टै छोड्दछन्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइट सफा छ, सजीलो नेविगेशनको अनुमति दिन्छ, र चाँडै आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ। त्यस्ता साइटहरू खराब डिजाइन र असंगठित तत्त्वहरूको तुलनामा बढी विश्वास गरिन्छ।
चाहे तपाइँ उत्पादन, सेवा, वा जानकारी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँको वेबसाइटको डिजाईन र सामग्रीले यो अभिव्यक्त गर्नुपर्दछ। खराब डिजाइन गरिएको साइटले संस्था वा व्यवसायको विश्वसनीयतालाई असर गर्छ।
तपाइँको वेबसाइट को डिजाइन को विभिन्न तत्वहरु यसको वेबपृष्ठहरु सफलतापूर्वक क्रॉल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। ती मध्ये एक साइटम्याप हो जसले खोज ईन्जिनहरूलाई तपाईंको साइटको पृष्ठहरू ठीक क्रॉल गर्न अनुमति दिन्छ।
हो, एक साइटम्यापको उद्देश्य भनेको वेबसाइटको सामग्री र पृष्ठहरूको बारेमा खोज इञ्जिनहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्नु हो। यसले तपाइँलाई खोज इन्जिनलाई तपाइँको वेबसाइटको कुन पृष्ठहरू सब भन्दा महत्त्वपूर्ण हो बताउनको लागि अवसर प्रदान गर्दछ।
यदि तपाइँको वेबसाइट मा धेरै सामग्री छ वा तपाइँको नयाँ साइट को लागी धेरै बाह्य लिंक छैन, एक साइटम्याप SERPs (खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठ) मा मान्यता प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
साइटम्यापले नेभिगेसनलाई पनि सजिलो बनाउँदछ। यो तपाइँको वेबसाइट मा सामग्री को अलग टुक्रा को माध्यम बाट सजिलो नेविगेशन को लागी अनुमति दिन्छ। यदि तपाइँ पहिलो पटकको आगन्तुक हुनुहुन्छ भने, एक साइटम्याप/आन्तरिक लिंक संरचना तपाइँलाई यसलाई सजीलो अन्वेषण गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाइँको साइटलाई खोज इञ्जिनसँग मिल्दोजुल्दो रूपमा, साइटम्यापहरूले वेबसाइटको पृष्ठहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण मेटाडेटा समावेश गर्दछ। यसको मतलब वेबसाईट उच्च बृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ।
वेबसाइट डिजाइन र SEO को एकीकरणले प्रत्येक वेबसाइट मालिकको लागि उज्यालो परिणाम ल्याउँछ। जब तपाइँ वेब डिजाइन प्रक्रियाको साथ एसईओ रणनीतिहरू मिश्रण गर्नुहुन्छ, खोज इञ्जिनहरूले शीर्ष परिणामहरूमा तपाइँको वेबसाइट समावेश गर्दछ।
SEO को आवश्यकता अनुसार एक वेबसाइट को डिजाइन सुधार गर्न सजिलो छ। तपाईं या त माथि छलफल गरिएको पोइन्टमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ वा पेशेवरहरूको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै Semalt।
Semalt मा योग्य विज्ञहरू द्वारा गरिएको परिमार्जनले न केवल तपाइँको वेबसाइटको डिजाईन/लुकमा बृद्धि गर्दछ तर खोजी ईन्जिनहरूमा यसको स्तर पनि सुधार गर्दछ।